ကွန်တီ Conte ကို ဂွါဒီယိုလာ Guardiola ဘယ်လိုရိခဲ့သလဲ
ကွန်တီ Conte ကို ဂွါဒီယိုလာ Guardiola ရိခဲ့သလား
3 Mar 2018 . 1:44 PM
မတ်လရဲ့ ပထမဆုံးတနင်္ဂနွေမှာ ဂွါဒီယိုလာ Guardiola ရဲ့ မန်စီတီးနဲ့ ကွန်တီ Conte ရဲ့ ချယ်လ်ဆီး စီချင်းထိုးပါမယ်။ ပွဲမတိုင်မီမှာ ဂွါဒီယိုလာက ကွန်တီကို စကားတစ်ခွန်းပြောလိုက်ပါတယ်။ ကွန်တီဟာ Master Tactician နည်းစနစ်မာစတာလို့ ချီးကျူးခဲ့တာပါပဲ။ ဒီချီးကျူးစကားဟာ အပေါ်ယံတွေးကြည့်ရင် ကွန်တီအတွက် ဂုဏ်ယူစရာ၊ ဒါပေမဲ့ ဂွါဒီယိုလာရဲ့ နောက်ဆက်တွဲစကားကိုကြားရတဲ့အခါ ကွန်တီစိတ်ဆိုးနေမလား။ ဂွါဒီယိုလာက “ ကွန်တီက အင်္ဂလန်ဘောလုံးလောကက ထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုရင်လည်း သူ ချန်ထားခဲ့တဲ့နည်းဗျူဟာတစ်ခု ရှိနေပါဦးမယ်။ ခံစစ်မှာ ကစားသမား(၅)ဦးထားပြီး ဘယ်လိုတိုက်စစ်ဆင်မလဲဆိုတာကို အင်္ဂလန်မှာ သူမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပါပဲ။ အာဆင်နယ်အပါအ၀င်အသင်းပေါင်းများစွာဟာ သူ့ရဲ့ နည်းဗျူဟာကို လိုက်ပြီးသုံးစွဲခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ သူဟာ နည်းစနစ်မာစတာပါပဲ။ အီတလီနဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းမှာ သူ စွမ်းဆောင်ခဲ့တာတွေကအံ့အားသင့်စရာကောင်းပါတယ်” လို့ ဆိုခဲ့တာပါပဲ။
ဂွါဒီယိုလာရဲ့ စကားဟာ ကွန်တီကို ဘောလုံးတစ်လုံးလို မိုးပေါ်ကိုမြှင့်တင်ပြီးမှ ပြန်ရိုက်ချလိုက်တာမျိုးပဲ။ လက်ရှိအချိန်မှာ ကွန်တီနဲ့ ချယ်လ်ဆီးအနာဂတ်ဟာ မရေရာဘူးမဟုတ်လား။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဂွါဒီယိုလာရဲ့ စကားဟာ ကွန်တီကို ရိသဲ့သဲ့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ ဆိုရမယ်။ ကွန်တီကတော့ ဂွါဒီယိုလာရဲ့ မန်စီးတီးဟာ Unstoppable Team လို့ တံဆိပ်ကပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဂွါဒီယိုလာရဲ့ အသင်းဟာ ငွေသုံးနိုင်တယ်။ နည်းပြကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ ပြီးတော့ နည်းပြနဲ့ ကစားသမားကြား ဆက်ဆံရေးကောင်းရှိတယ်။ ရည်မှန်းချက်တူညီတယ်လို့ ကွန်တီက မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ချယ်လ်ဆီးဟာ မန်စီးတီးနဲ့ (၂၂)မှတ်အထိ ကွာဟနေပါတယ်။ ဒီပွဲမှာသာထပ်ပြီးရှုံးနိမ့်မယ်ဆိုရင် လက်ရှိချန်ပီယံချယ်လ်ဆီးဟာ ချန်ပီယံလောင်း မန်စီးတီးကို ဂုဏ်သိက္ခာအရ ထပ်ပြီးအရေးနိမ့်ရပါဦးမယ်။ ပြီးတော့ ကွန်တီနဲ့ ချယ်လ်ဆီးရဲ့ အနာဂတ်ဟာလည်း ပိုလို့မှုန်ဝါးသွားမယ်မဟုတ်လား။ ဂွါဒီယိုလာဟာ ကွန်တီကို ချီးကျူးသလိုလိုနဲ့ ရိသဲ့သဲ့လုပ်ပြီး စကားလုံးတိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲလိုက်ပါတယ်။
ကှနျတီ Conte ကို ဂှါဒီယိုလာ Guardiola ရိခဲ့သလား
မတျလရဲ့ ပထမဆုံးတနင်ျဂနှမှော ဂှါဒီယိုလာ Guardiola ရဲ့ မနျစီတီးနဲ့ ကှနျတီ Conte ရဲ့ ခယျြလျဆီး စီခငျြးထိုးပါမယျ။ ပှဲမတိုငျမီမှာ ဂှါဒီယိုလာက ကှနျတီကို စကားတဈခှနျးပွောလိုကျပါတယျ။ ကှနျတီဟာ Master Tactician နညျးစနဈမာစတာလို့ ခြီးကြူးခဲ့တာပါပဲ။ ဒီခြီးကြူးစကားဟာ အပျေါယံတှေးကွညျ့ရငျ ကှနျတီအတှကျ ဂုဏျယူစရာ၊ ဒါပမေဲ့ ဂှါဒီယိုလာရဲ့ နောကျဆကျတှဲစကားကိုကွားရတဲ့အခါ ကှနျတီစိတျဆိုးနမေလား။ ဂှါဒီယိုလာက “ ကှနျတီက အင်ျဂလနျဘောလုံးလောကက ထှကျခှာသှားမယျဆိုရငျလညျး သူ ခနျြထားခဲ့တဲ့နညျးဗြူဟာတဈခု ရှိနပေါဦးမယျ။ ခံစဈမှာ ကစားသမား(၅)ဦးထားပွီး ဘယျလိုတိုကျစဈဆငျမလဲဆိုတာကို အင်ျဂလနျမှာ သူမိတျဆကျပေးခဲ့တာပါပဲ။ အာဆငျနယျအပါအဝငျအသငျးပေါငျးမြားစှာဟာ သူ့ရဲ့ နညျးဗြူဟာကို လိုကျပွီးသုံးစှဲခဲ့တယျမဟုတျလား။ သူဟာ နညျးစနဈမာစတာပါပဲ။ အီတလီနဲ့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးမှာ သူ စှမျးဆောငျခဲ့တာတှကေအံ့အားသငျ့စရာကောငျးပါတယျ” လို့ ဆိုခဲ့တာပါပဲ။
ဂှါဒီယိုလာရဲ့ စကားဟာ ကှနျတီကို ဘောလုံးတဈလုံးလို မိုးပျေါကိုမွှငျ့တငျပွီးမှ ပွနျရိုကျခလြိုကျတာမြိုးပဲ။ လကျရှိအခြိနျမှာ ကှနျတီနဲ့ ခယျြလျဆီးအနာဂတျဟာ မရရောဘူးမဟုတျလား။ ဒီလိုအခြိနျမြိုးမှာ ဂှါဒီယိုလာရဲ့ စကားဟာ ကှနျတီကို ရိသဲ့သဲ့ပွောခဲ့တယျလို့ပဲ ဆိုရမယျ။ ကှနျတီကတော့ ဂှါဒီယိုလာရဲ့ မနျစီးတီးဟာ Unstoppable Team လို့ တံဆိပျကပျခဲ့ပါတယျ။ ဂှါဒီယိုလာရဲ့ အသငျးဟာ ငှသေုံးနိုငျတယျ။ နညျးပွကောငျးကို ပိုငျဆိုငျထားတယျ။ ပွီးတော့ နညျးပွနဲ့ ကစားသမားကွား ဆကျဆံရေးကောငျးရှိတယျ။ ရညျမှနျးခကျြတူညီတယျလို့ ကှနျတီက မှတျခကျြပွုခဲ့ပါတယျ။
ခယျြလျဆီးဟာ မနျစီးတီးနဲ့ (၂၂)မှတျအထိ ကှာဟနပေါတယျ။ ဒီပှဲမှာသာထပျပွီးရှုံးနိမျ့မယျဆိုရငျ လကျရှိခနျြပီယံခယျြလျဆီးဟာ ခနျြပီယံလောငျး မနျစီးတီးကို ဂုဏျသိက်ခာအရ ထပျပွီးအရေးနိမျ့ရပါဦးမယျ။ ပွီးတော့ ကှနျတီနဲ့ ခယျြလျဆီးရဲ့ အနာဂတျဟာလညျး ပိုလို့မှုနျဝါးသှားမယျမဟုတျလား။ ဂှါဒီယိုလာဟာ ကှနျတီကို ခြီးကြူးသလိုလိုနဲ့ ရိသဲ့သဲ့လုပျပွီး စကားလုံးတိုကျပှဲ ဆငျနှဲလိုကျပါတယျ။
by Ko Kyue . 41 mins ago